जूनमा जापानी मौसम! वर्षा मौसम होक्काइडो र ओकिनावा बाहेक - Best of Japan
धेरै नीलो र बैजनी hydrangea म्याक्रोफिला फूलहरू जापानी मन्दिरको दृश्यमा फूले। मिगेट्सु-इन मन्दिर, कुमकरा, जापान = एडोब स्टकमा फोटो खिचेको छ
जापानमा जुन जुनमा धेरै वर्षा हुन्छ। जुन वसन्त summerतु देखि गर्मी सम्मको संक्रमण अवधि हो। त्यस कारणका लागि, म यात्राको लागि समयको रूपमा जून सिफारिश गर्दिन। यद्यपि, वर्षाको दिनमा दुबै मन्दिर र मन्दिरहरू शान्त र धेरै शान्त छन्। जुनमा, hydrangeas मन्दिर र मन्दिरहरूमा खिल हुनेछ। यदि तपाइँ जुनमा यस्ता स्थानहरूमा जानुहुन्छ, तपाइँ निश्चय पनि तपाइँको दिमाग शान्त पार्नुहुनेछ।
जूनमा टोकियो, ओसाका, होक्काइडो को जानकारी
म शान्त मन्दिर र मन्दिरहरूको भ्रमण गर्ने सल्लाह दिन्छु।
हिमालहरूमा पनि अप्रत्याशित रूपमा सुन्दर दृश्यहरू छन्
यदि तपाईं जूनमा टोकियो, ओसाका वा होक्काइडो जाने योजनामा ​​हुनुहुन्छ भने, कृपया तलका स्लाइडरमा थप जानकारीको लागि छवि क्लिक गर्नुहोस्।
JIzo निलो बिब संग मिगेट्सिन मन्दिर कानागावा, जापान = शटरस्टकमा
म जुनमा कामकुरा मन्दिरहरुलाई पर्यटन आकर्षण को रूप मा सिफारिश गर्दछु। कामाकुरा टोक्यो शहरको केन्द्रबाट ट्रेन बाट करिब एक घण्टा टाढा छ।
मीगेत्सुइन मन्दिर र हसेदेरा मन्दिर विशेष रूपमा सिफारिस गरिन्छ। हाइड्रान्जियसको असंख्य हजारौं यी मन्दिरहरूमा प्रत्येक वर्ष जूनमा खिलछन्। यस पृष्ठमा शीर्ष फोटो Meigetsuin मा लिइएको थियो।
यदि तपाईं क्योटोको मन्दिरहरूमा हाइड्रान्जाहरू हेर्न चाहानुहुन्छ भने, म तपाईंलाई सिफारिश गर्दछु कि तपाईं मिमूरोटोजी मन्दिरमा जानुहोस्। मीमुरोटोजी यसको सुन्दर हाइड्रेंजिया बगैंचाको लागि प्रसिद्ध छ। बगैचा जुनको सुरुदेखि जुलाईको सुरूसम्म वरिपरि प्रत्येक वर्ष खुल्छ। तल मीमोटोरोजीको बगैंचाको विशेषता रहेको एक भिडियो छ।
हाइड्रान्जस जूनको मध्यदेखि जुलाईको सुरूदेखि होन्शुका मुख्य शहरहरूमा खिलछन्। यद्यपि, २०१ in मा धेरै हाइड्रेंजाहरू जूनको सुरूदेखि नै फूले।
चेरी फूलहरू घामको दिनमा सुन्दर देखिन्छन्। अर्कोतर्फ, हाइड्रेंजस फूलहरू सुन्दर वर्षा र चम्किलो देखिन सक्छन्। सायद हाइड्रान्ज्याहरू वर्षाका दिनमा बढी सुन्दर देखिन्छन्। प्रत्येक वर्ष धेरै पर्यटक चुपचाप यी गर्मी hydrangeas कदर। किन तपाईं आफैले देख्नुहुन्न?
हाइड्रेंजियाका फूलहरू अधिक सुन्दर हुन्छन् जब उनीहरू वर्षा * शटरस्टकमा हिट हुन्छन्
हिमालहरू पनि अप्रत्याशित रूपमा सुन्दर दृश्यहरू = शटरस्टक
हाइड्रान्जाहरू पहाडहरूमा पनि फल्ने। टोकियोमा बसोबास गर्ने जापानी मानिसहरु अक्सर हाकोनमा हाइड्रान्जाहरू हेर्न जान्छन्, तर कामकुरा मात्र होइन।
माथिको भिडियोले हाकिने तोजान रेलमार्ग वरिपरि हाइड्रेंजिया फूलहरू प्रस्तुत गर्दछ।
हाकोन तोजान रेलवे रेलमार्ग ट्र्याकहरूमा फल्ने फ्लोरको लागि प्रसिद्ध छ। रेलमार्गमा लगभग १०,००० भूखंडहरू हाइड्रान्जाहरू छन्।
हाकोनमा प्रत्येक वर्ष हाइड्रेंजियाका धेरै फूलहरू जूनको अन्त्यबाट जुलाईको बीचमा खिलिन्छन्। Hakone कामकुरा भन्दा अलि चिसो छ, त्यसैले केही पछि फूलहरू फूल्छन्।
प्रत्येक वर्ष जब hydrangea खिल, तिनीहरूको दृश्यहरुमा समर्पित रेलहरू ठाउँ लिन्छ। थप जानकारीको लागि, कृपया तल आधिकारिक वेबसाइटमा जानुहोस्।
>> Hakone तोजान रेलमार्ग को आधिकारिक वेबसाइट यहाँ छ